Otu esi etolite ụzarị: njirimara na ụdị | Meteorology netwọkụ
Portillo nke German | 01/10/2021 10:00 | Emelitere ka 30/09/2021 19:30 | Ihe gbasara ihu igwe
Àmụ̀mà na -amasịkarị ndị mmadụ. Ọ bụ ike eke electrostatic orùrù. Ọ na -emekarị n'oge ebili mmiri eletrik nke na -ewepụta ọkụ eletrik. Mgbapụta a nke àmụmà na -esonyere mpụta ọkụ a na -akpọ àmụmà na ụda a na -akpọ égbè eluigwe. Agbanyeghị, ọtụtụ mmadụ amaghị otú e si akpụpụta ụzarị.
Ya mere, anyị ga -arara akụkọ a ka ọ gwa gị otu esi akpụpụta ụzarị na ihe bụ ụdị afọ dị iche iche.
2 Kedu otu esi akpụ ụzarị ọkụ
3 Otu esi etolite ụzarị ọkụ na ụdị ha dị iche iche
Mgbapụta nke àmụmà na -esonyere site na mpụta ọkụ. Mwepụta nke ọkụ a na -akpọ àmụmà, ọ na -esitekwa na mgbanye ọkụ eletrik nke na -eme ka ionize molecule dị na ikuku. Ozugbo ọ mechara, ụda a na -akpọ Thunder na -egwu, nke ebili mmiri na -ama jijiji mere. Ọkụ eletrik ewepụtara na -agafere ikuku, ọ na -eme ka ikuku dị ọkụ, na -eme ka ikuku gbasaa ngwa ngwa, ma na -emepụta ụda pụrụ iche site na ala. Ụzarị ndị ahụ nọ na ọnọdụ plasma.
Ogologo ogologo ogologo ihe dị ka mita 1.500-500. N'ụzọ na -akpali mmasị, na 2007, Mgba ọkụ kacha ogologo na ndekọ edere na Oklahoma, na -eru ogologo kilomita 321. Àmụ̀mà na -agakarị na nkezi ọsọ nke ihe dị ka kilomita 440 kwa sekọnd, ruo kilomita 1.400 kwa sekọnd. Ihe nwere ike ịdị iche bụ nde volta m ruru ala. Ya mere, ụzarị ọkụ ndị a nwere nnukwu ihe egwu. Ihe dị ka nde ifufe àmụmà nde iri na isii ka a na -edekọ na mbara ala kwa afọ.
Ihe kacha dị mma bụ na n'etiti ụdị ụzarị dị iche iche, ihe ndị a na -emepụta ihe dị mma n'ime ala yana irighiri ihe ndị dị n'igwe ojii. Nke a bụ n'ihi mmepe igwe kwụ ọtọ a na -akpọ cumulonimbus. Mgbe igwe ojii cumulonimbus rutere na tropopause (mpaghara ikpeazụ nke troposphere), ụgwọ dị mma n'igwe ojii bụ ọrụ maka ịdọrọ ebubo ọjọọ. Mmegharị nke ebubo eletriki na ikuku na -eme ka ụzarị. Ọ na -enwekarị mmetụta azụ na ihu. Ọ na -ezo aka n'echiche na ụmụ irighiri na -ebili ozugbo wee laghachi ka ọkụ wee daa.
Àmụmà nwere ike iwepụta 1 nde watts nke ike ozugbo, nke yiri mgbawa nuklia. Ịdọ aka na ntị na -amụ ịmụ àmụmà na ihe niile metụtara meteorology ka a na -akpọ sayensị ụwa.
Kedu ka ọkụ eletrik si malite ka bụ okwu na -ese okwu. Ndị ọkà mmụta sayensị enwebeghị ike ịchọpụta ihe kpatara ya. Ndị kacha ewu ewu bụ ndị na -ekwu na ọgba aghara ikuku bụ ihe kpatara mmalite ụdị ọkụ. Ọgba aghara ndị a na ikuku bụ n'ihi mgbanwe ikuku, iru mmiri, na nrụgide ikuku. Ọzọkwa a na -atụle mmetụta nke ifufe nke anyanwụ na mkpokọta nke irighiri anyanwụ.
A na -ewere ice dị ka akụkụ dị mkpa nke mmepe. Nke a bụ maka na ọ bụ ya ka ọ na -akwalite ikewapụ ụgwọ dị mma na adịghị mma n'igwe ojii cumulonimbus. A pụkwara ịmepụta àmụ̀mà n'igwe ojii nke ntụ site na mgbawa ugwu, ma ọ bụ ọ nwere ike ịpụta site na uzuzu sitere n'ọkụ dị n'oké ọhịa nke nwere ike ibute ebubo kwụ ọtọ.
N'echiche nrụnye electrostatic, a na -eche na ọ bụ usoro nke mmadụ amabeghị nke ọma ka ọ ga -eji na -ebu ọkụ eletrik. Nkewa nke ebubo chọrọ ikuku siri ike elu elu, nke na -ahụ maka iburu ụmụ irighiri mmiri ahụ elu. N'ụzọ dị otu a, mgbe ụmụ irighiri mmiri rutere ebe dị elu ebe ikuku gbara ya gburugburu na -ajụ oyi, a ga -eme ngwa ngwa jụrụ oyi. Nọmalị a etoju na-supercooled na okpomọkụ nke -10 na -20 ogo. Nchikota nke kristal ice bụ ngwakọta mmiri na akpụrụ mmiri, nke a na -akpọ akụ mmiri igwe. Mkpesa ahụ mere ka ebufere obere ụgwọ dị mma na kristal ice yana obere ụgwọ na -adịghị mma na akụ mmiri igwe.
Ihe dị ugbu a na -eme ka kristal kpụ ọkụ n'ọnụ na -aga elu ma na -eme ka ebubo dị mma na -ewuli elu n'azụ igwe ojii. N'ikpeazụ, mmetụta nke ike ndọda ụwa na -eme ka akụ mmiri igwe daa na ụgwọ adịghị mma, n'ihi na akụ mmiri igwe na -ebuwanye ibu ka ọ na -abịaru nso n'etiti na ala nke igwe ojii. Nkewa na nchịkọta ụgwọ na -aga n'ihu ruo mgbe ike ga -ezu iji malite mwepụta.
Echiche ọzọ banyere usoro mgbasa ozi nwere ihe abụọ. Ka anyị hụ ihe ha bụ:
Ịda ice na ụmụ irighiri mmiri na -adapụta na -adaba mgbe ha dabara n'ọkụ eletrik sitere n'okike.
Akụkụ mmiri na -ada ada na -akụkọta ma na -ebunye ya site na ntinye electrostatic.
Otu esi etolite ụzarị ọkụ na ụdị ha dị iche iche
Kacha nkịtị àmụmà. ọ bụ nke a na -ahụkarị, nke a maara dị ka àmụmà. Nke a bụ akụkụ a na -ahụ anya nke tracing ray. Ọtụtụ n'ime ha na -eme n'igwe ojii yabụ enweghị ike ịhụ ha. Ka anyị hụ ụdị ụzarị ndị bụ isi:
Igwe ojii na-ala: ọ bụ nke a kacha mara amara na nke abụọ a na -ahụkarị. Ọ bụ ihe kacha eyi ndụ na ihe onwunwe egwu. Ọ nwere ike ịda n'ala wee gbapụta n'etiti igwe ojii cumulonimbus na ala.
Pearl Ray: nke a bụ àmụmà nke sitere n'igwe ojii ruo na ala nke yiri ka ekewara ya n'usoro nke akụkụ dị mkpụmkpụ, na-enwu gbaa.
Àmụmà staccato. Ọ na -enwukarị enwu ma nwee nnukwu mmetụta.
Cloudgwé ojii ruo àmụ̀mà: na -eme n'etiti mpaghara ndị na -adịghị na ala. Ọ na -emekarị mgbe igwe ojii abụọ dị iche iche na -ewepụta ihe dị iche na ike eletrik.
Enwere m olile anya na site na ozi a, ị ga -amụtakwu gbasara otu esi etolite ụzarị, njirimara ha na ụdị dị iche iche dị.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Ihe gbasara ihu igwe » Kedu otu esi akpụ ụzarị ọkụ